Etu ị ga-esi weghachite foto ehichapụ na WhatsApp na gam akporo na iPhone | Nzukọ Ekwentị
Etu ị ga-esi weghachite foto sitere na WhatsApp
Ignacio Sala | | WhatsApp
Ọ bụrụ na ị nwaala oge naghachi-ehichapụ foto site na WhatsApp odighi uzo ichota ya, i rutela ederede edeputara. Naghachi foto ehichapụ WhatsApp ma ọ bụ vidiyo dabere na ọtụtụ ihe, ọtụtụ n'ime nke ị nwere ike ọ gaghị ama mana nke ga-enye gị ohere iweghachite ọdịnaya ị furu efu, ọ bụrụhaala na ọ dịbeghị anya.
Mana nke mbụ, anyị ga-amarịrị ihe sistemụ arụmọrụ nke ngwaọrụ anyị bụ, ebe ọ dabere na ọ bụ iPhone ma ọ bụ ama ejiri gam akporo, usoro ahụ dị iche, ebe ọ bụ na ọbụlagodi na ọ bụ otu ngwa ahụ, ọgwụgwọ ha mere nke faịlụ ahụ dị iche.
1 Naghachi foto ehichapụ na WhatsApp na gam akporo
1.1 Chọọ na foto foto
1.2 Chọọ foto Google ma ọ bụ ọrụ nchekwa igwe ojii ndị ọzọ
1.3 Jiri oyiyi mgbake software
1.4 Weghachi ndabere
2 Naghachi foto ehichapụ na WhatsApp na iPhone
2.1 Chọọ na gallery
2.2 Chọọ na ihe ndị ehichapụ
2.3 Chọọ iCloud, Foto Google, ma ọ bụ ọrụ nchekwa
2.4 Chọọ na kọmputa gị
2.5 Weghachi WhatsApp ndabere
3 Rịọ otu
4 Na WhatsApp Web, ị gaghị ahụ ya
Naghachi foto ehichapụ na WhatsApp na gam akporo
Chọọ na foto foto
Nwa, WhatsApp na-ahazi ya mere na-echekwa foto na vidiyo ọ bụla na akpaghị aka na anyị na-enweta site na ngwa ahụ na WhatsApp Images na WhatsApp Videos nchekwa, nchekwa dị iche iche ebe a na-echekwa foto na vidiyo niile anyị ji ngwaọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ị gbanwebeghị nhọrọ ahụ, o yikarịrị ihe oyiyi ahụ dị na folda ahụ, folda ị nwere ike ịnweta ozugbo na ngwa gallery na ngwaọrụ gị, ma ọ bụ jiri njikwa faili, yana faịlụ sitere na Google bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma.
Chọọ foto Google ma ọ bụ ọrụ nchekwa igwe ojii ndị ọzọ
Ọ bụrụ na ị jiri Foto Google, olile anya, ọ bụrụ na anyị maara ụbọchị anyị nwetara onyinyo ahụ, ọ ga-abụ na ọ bụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị mmekọrịta na-arụ ọrụ na ma ntụziaka, ihe oyiyi ahụ ka dị na igwe ojii Google.
Ọ bụrụ n'ijighi Google Photos mana ị na-eme ya OneDrive, Dropbox, ma ọ bụ Foto Amazon, I nwere ike lee anya na ọrụ ndị a na-elele ma ọ bụrụ na ehichapụ ihe oyiyi dị.
Jiri oyiyi mgbake software
Ọ bụrụ na enweghị ụzọ ị ga-esi nwetaghachi onyonyo ndị ahụ ihichapụ n’oge gị, ọ ga-abụ oge iji ngwa na-enye anyị ohere iji naghachi faịlụ ehichapụ site kpọmkwem ngwa na i scanomi ngwaọrụ niile ehichapụ ọdịnaya na mbu na enwere ike iweghachite ya.
Dịka m tụlere n’elu, ọ bụrụhaala na ọ dịbeghị anya anyị tufuru onyogho a, anyị nwere ike iweghachi ya. O di nwute, Gam akporo agunyeghi egweri egweri ebe faịlụ niile anyị na-ehichapụ na ngwaọrụ anyị na-aga, ya mere na nke a abụghị nhọrọ.
Otu nhọrọ iji weghachite foto ahụ ehichapụ bụ weghachite ndabere site na WhatsApp. Nsogbu anyị na-ahụ mgbe anyị na-eme usoro a bụ abụọ:
Anyị na-atụfu mkparịta ụka niile nke anyị debere kemgbe nkwado ndabere ikpeazụ.
Ọ bụrụ na ndị ikpeazụ ndabere ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya, o yikarịrị ka ị weghachite oyiri ahụ, anyị enweghị ike ịchọta onyinyo ahụ anyị na-achọ.
Ọ bụrụ na anyị doro anya na anyị anaghị echefu ịhapụ mkparịta ụka kachasị ọhụrụ, anyị ga-ebu ụzọ jụọ ya ụbọchị emere nkwado ndabere ikpeazụ WhatsApp na akaụntụ Google Drive anyị, ebe ọ bụrụ na ọ dị nso nso a, ọ ga-abaghị uru iji weghachite ya.
WhatsApp nkwado ndabere na Google Drive, bụ onye ọrụ na-adịghị ahụ anya, ya bụ, agbanyeghị na echekwara anyị na akaụntụ Google anyị, anyị enweghị ike ịnweta ya n'oge ọ bụla, yabụ anyị enweghị ike ịlele ọdịnaya echekwara na ya.
Naghachi foto ehichapụ na WhatsApp na iPhone
Chọọ na gallery
Dị ka ọ dị na gam akporo, ebe mbụ anyị ga-enyocha ma ọ bụrụ na achọtara oyiyi ahụ dị na iOS gallery, a na-akpọ Foto dị na ọba egwu WhatsApp, ebe a na-echekwa onyogho niile anyị na-ebudata na aka ma ọ bụ na-akpaghị aka na WhatsApp.
WhatsApp maka iOS, dị ka gam akporo, na-echekwa ihe oyiyi niile anatara na ngwaọrụ ahụ, yabụ ọ bụrụ na ịgbabeghị nhọrọ ahụ iji chekwaa ohere, o yikarịrị ka ọ dị na ngwa a.
Chọọ na ihe ndị ehichapụ
N'adịghị ka gam akporo, iOS nwere ahịhịa nwere ahịhịa ebe nke ọ bụla n'ime faịlụ ehichapụ, foto na vidiyo na-aga, ebee a ga-edebe ya ruo ogologo ụbọchị 30. Mgbe oge ahụ gasịrị, ihe oyiyi ahụ kpam kpam na ngwaọrụ anyị.
N'ihe banyere foto na vidiyo, enwere ike ịchọta ahịhịa ahụ n'ime ngwa Foto, na ngalaba Wepụ ya.
Chọọ iCloud, Foto Google, ma ọ bụ ọrụ nchekwa
Y’oburu Mmekọrịta iCloud nke foto na vidiyo gbanyeỌ bụrụ na ihe oyiyi bụ na mpịakọta, ọ ga-abụ na iCloud ndabere ma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na iji Google Photos ma ọ bụ ngwa igwe ojii ọ bụla dịka Dropbox ma ọ bụ OneDrive, ọ ga-abụ na ị ga-ahụ onyonyo ahụ ihichapụ.
Chọọ na kọmputa gị
Ọ bụrụ na ịnweghị iji iCloud mana oge niile detuo onyonyo na vidiyo na kọmputa gị na onwere ohere na iPhone, ị kwesịrị ile anya na akwụkwọ a, n'ihi na onyogho ị na-achọ nwere ike ịdị ebe ahụ.
Dị ka ọ dị na gam akporo, nkwado ndabere nke WhatsApp nke emere na iCloud ndị ọrụ adịghị ahụ ya, yabụ na anyị enweghị ike ịnweta ya ma gụọ onyonyo niile echekwara.
Nanị ihe ga - eme bụ, dị ka ọ dị na gam akporo, lelee ụbọchị nke nkwado ndabere ikpeazụ ma weghachite ya, ọ bụ ezie na nke a pụtara ịnwe mkparịta ụka kachasị ọhụrụ anyị nwere site na ngwa ngwa ozi a.
I tulee ụbọchị nke ikpeazụ ndabere anyị ga-enweta nhọrọ nhazi nke ngwa, pịa chats na na Ndabere.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme otu ugwu site na molehill. Ihe ngwọta kachasị mfe iji weghachite foto ma ọ bụ vidiyo nke anyị kpochapụrụ na WhatsApp, bụ ịlaghachi na ya juo onye ma obu otu ebe ekesara ya.
Na WhatsApp Web, ị gaghị ahụ ya
WhatsApp Web abụghị ihe ọzọ a echiche nke mobile ngwa na ihe nchọgharị, ya mere ọdịnaya niile egosiri na ngwa a, ga-egosi n'otu oge ma ọ bụrụ na anyị enweta site na WhatsApp Web, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ebumnuche nke iweghachite foto ahụ ehichapụ site na ọrụ a, ị nwere ike ịga echefu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » WhatsApp » Etu ị ga-esi weghachite foto sitere na WhatsApp
Olee otú yiri iPhone ihuenyo TV